Tag: degitaanka bogga | Martech Zone
Tag: bogga degitaanka
Bogga degitaanku waa mid ka mid ah aasaaska aasaasiga ah ee ka caawin doona macaamilkaaga inuu ku dhex maro safarka iibsadaha. Laakiin maxay dhab ahaan tahay? Iyo tan ka sii muhiimsan, sidee bay si gaar ah ugu kobcin kartaa ganacsigaaga? Si loo soo koobo, bogga soo dejinta wax ku oolka ah waxaa loogu talagalay inuu sameeyo macaamil macquul ah inuu tallaabo qaado. Tani waxay noqon kartaa inaad iska qorto liiska emaylka, iska diiwaangeliso dhacdo soo socota, ama iibsato alaab ama adeeg. In kasta oo hadafka hore uu ka duwanaan karo,
Metadata waa madal madaxbannaan oo dalab ah oo hagaajineysa kharashkaaga xayeysiinta bulshada iyo dijitaalka ah si ay kaaga caawiso inaad si dhakhso leh uga abuurto baahi tayo leh iyo dhuumaha koontooyinkaaga bartilmaameedka. Aaladda gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'AI' iyo mashiinka barashada mashiinka ayaa falanqeynaya xogta CRM taariikheed si loo aqoonsado cidda ay tahay inuu arko xayeysiintaada, ka dibna mashiinka tijaabinta noocyada kala duwan ayaa tijaabiya boqolaal kala duwanaansho oo wuxuu ku fiicnaadaa waxa ugu wanaagsan ee u soo saara natiijooyinka ugu fiican. Natiijadu waa dhuun tayo leh oo ka timaadda xisaabaadka bartilmaameedka
Sabtida, Juun 25, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Shaki kuma jiro in hagaajinta bogagga soo degitaanku yahay dadaal qiimo leh oo suuqley kasta ah. Email-yada 'Monks' ayaa isku soo koobay muuqaalkan is-dhexgalka ah ee dhammaystiran ee ku saabsan talooyinka hagaajinta bogga ee keena natiijooyinka la qiyaasi karo Waa kuwan tirooyin waaweyn oo laxiriira degsiimo bogga soo degitaan. Madaxweynaha Barrack Obama wuxuu ururiyey $ 60 milyan oo dheeri ah isagoo gacan ka helaya tijaabinta A / B boggaga dhaadheer ee dhaadheer waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan ilaa 220% hogaamin ka badan inta ka sareysa la-soo-wac ficil 48%